Ngaba Ingxelo KaLukiyo Ingxelo Eyona Ntle?
Eyona yaziwa ngokugqithisileyo njengomKristu we-apologist, uScott Lewis wagxeka ubuKristu obusekelwe kwizizathu kunokuba ube ngumKristu onokholo. Esi sinqumo esinqwenelekayo kuye ngenxa yokuba, okokuqala, ubuKrestu bendabuko bukholelwa ngokusesikweni, kwaye okwesibini, ukuguquka kukaLuke kwakunokwenza ngokunyamekela iinkolelo ezichazela inyaniso ephakamileyo, kwaye isigqibo sokuba ama-myths angamaKristu athi inyaniso kukho.
Oku kugxininisa kwi-apologetics engqiqweni yi-CS Lewis apho abantu abaninzi baqhelana nabo, kodwa kukho enye i-CS Lewis ejolise kwiimvakalelo. Ukuguquka kukaLuke kwibuKrestu kubonakala ngathi bebuhlungu ngakumbi kunokuba kunengqiqo, nangona kukho ukubhikisha kwakhe kwangaphambili, nokubaluleka kwesimo sakhe sangaphakathi kuxoxwa nguye ekuqaleni kwe -Pilgrim's Regress (1933) kwaye emva kwexesha elidlulileyo njengoSandi (1955). ). Ukuxhatshazwa nokuphikisana phakathi kokholo ngenxa yemvakalelo kunye nokukholelwa ngenxa yengqiqo ayisoze isisombululo kwiincwadi zikaL Lewis.
NgamaKristu aseMere , uL Lewis uthi: "andiyikucela umntu ukuba amkele ubuKristu xa ukucinga kwakhe okulungileyo kukuxelela ukuba ubunzima bobubungqina buchasene nayo." Zonke iincwadi zakhe zenzelwe ukuthetha ukuba ingcamango engcono yomntu kufuneka ibatshele ukuba ubunzima bobubungqina bubonisa ubuKrestu, kwaye ngoko ke umntu ofanelekileyo kufuneka abe ngumKristu.
Oku kwachasene ngqo nombono wendabuko othi umntu kufuneka abe ngumKristu ngesiseko sokholo, kwaye ngaphezu koko ukuba kulungile ukuba umntu akholwe ngenxa yokholo kunokuba ubungqina.
U-CS Lewis walahla nayiphi na ixabiso xa ethatha "iziqwenga zokholo," echaza ukuba nayiphi na umntu ongumntu owamkela ubuKrestu nangona ecinga ukuba ubungqina kunye nesizathu sichasene nalo "sisisithakazelo". abangakholelwa kuThixo, kungekho amakholwa akhoyo.
Abagxeki bangakholelwa ngenxa yezizathu kunye nobungqina; Ngoko ke, kuphela isizathu kunye nobungqina obunokubangela ukuba bacinge kwakhona.
Inyaniso kukuba uLias ufundwa kwaye uyamkelwa ngokukodwa ngamakholwa, nangona kunjalo, abaxhasi. Ngako oko, ugxininiso lwakhe ekumiseni isiseko sobuKristu buvumela abazalwana ukuba bacinge ukuba nabo, bakholelwa ngenxa yezizathu ezingqiqweni. U-Lewis wagxeka iinkokeli zecawa ngokuzama ukufumana ubuKristu kwihlabathi lanamhlanje, ngokwenzululwazi kodwa oko kwenzeka okokuqala nguL Lewis: ukwakha ukucamngca kweenkolelo zendabuko esikhundleni senkolo yemveli.
Yiyona imizamo kaL Lewis yokubonisa ubuKristu, kunye nobuKristu bamaOthodoki ngaloo ndlela, njengengqiqo, inkolelo yenkolelo ekhokelwa ngububungqina obubonakala bukunceda ukuba luthande ngakumbi namhlanje. Ixesha lamanje liye lakhutshwa ukususela ekukhanyeni ngexabiso lezesayensi, isizathu, kunye nokuqonda. Ukholo olungenangqiqo lucatshulwa okanye lugqithiselwa, ngoko ke iingxabano ezinjalo zithwala ubunzima kubantu. Umntu obonisa ukholo uyabonakala enengqiqo, nangona kunjalo, udunyiswa njengomprofeti omtsha
UJohn Beversluis uyabhala:
"Amacandelo anikezelwe kwi-biography afunda njenge-hagiography. Sisoloko sihlangana nento nje ngoLuki; iingxelo zokuziphatha kwakhe, iingcinga kunye nobudlelwane bomntu ngokwazo kunokuba zichazwe ngendlela ephakamileyo yeso sifundo somfundi. Ukumchaza njengomhlobo omhle ngumntu ongenasidima; Simele siqiniseke ukuba akukho mntu ube ngumhlobo olungcono. Ukumdumisa njengobuchule kwiimpikiswano kunzima kakhulu ukuncoma; Sixelelwa ukuba uScott Lewis unokulingana nama-wits kunye nabani na owake waphila. Ukumvumela ukuba ngumloli wobuKristu wobukhulu bokuqala akwanele ngokupheleleyo; Umbono wakhe wobuKristu obufanele ufanele ufaniswe kunye noSt. John kwi-Isle yasePatmos. Emva kwexesha elithile, umntu ulangazelela ukukhanya kwelanga ukuze akhuphe intlanzi ehloniphekileyo. Omnye amathayi okunyamezela ezi zidlulileyo kwaye kufuneka ahlamelele ubungqina obufanayo ngendlela enomxholo emva kwencwadi. "
Ngomnye wabalingisi be-Lewis abanomdla kakhulu, uWilliam, ubhala ukuba uLee "uye waba sekhulwini leminyaka ukususela ekubeni wafa into enjengomntu oyingcwele kwiingqondo zabazalwana abanokholo." Ngaloo ndlela, Ndifumanisa abafundisi bezobugcisa kunye neengcali ezixubileyo zikhankanya i-CS Lewis okanye zithembele kwiingxoxo zakhe kwimigudu yabo.
ITheoloji yakha phezu kokuqonda kunye nokufezekiswa kwalabo abafikile ngaphambili, kodwa uLi Lewis akabonakali ukuba asebenze njengeplanki encinci kwipulatifomu yanoma ubani. Ukudibaniswa kokuqhelekileyo kunye nokuxothwa kobugcisa kunomdla kakhulu - nokuba umkholi oqhelekileyo uyazi into ethile abaye baphoswa ngabaqeqeshi, okanye uLe Lewis akayena ololo hlobo okholelwa ukuba uyakho.
Uluhlu lokuFunda lwe-Celtic Paganism